SSD TLC, SLC MA Ọ BỤ MLC: NKE KA MMA - SSD - 2019
Ọtụtụ mgbe, mgbe ị na-eji vidiyo vidio Sony Vegas a ma ama, onye ọrụ nwere ike inwe nsogbu na ịmepe vidiyo nke ụfọdụ usoro. Mmehie kachasị na-eme mgbe ị na-agbalị imepe faịlụ vidiyo na * .avi ma ọ bụ * .mp4 formats. Ka anyi gbalịa idozi nsogbu a.
Esi emeghe *avi na * .mp4 na Sony Vegas
Nsogbu nke Sony Vegas adịghị emeghe * .avi na * .mp4 nwere ike ịbụ na enweghị koodu codecs dị na kọmputa gị. Na nke a, naanị ibudata K-Lite Codec Pack. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị nwetaworị koodu codec ahụ, gbalịa na-emelite ya.
Ịkwesịrị ịchọta ụdị ọhụrụ nke ngwa ngwa Player.
Download Ndenye Oge maka n'efu
Ọrụ na ụlọ akwụkwọ
Ihe kachasị kpatara * .avi adịghị emeghe bụ enweghị ma ọ bụ na-adịghị arụ ọrụ nke ọbá akwụkwọ aviplug.dll dị mkpa.
1. Buru akwukwo ozo di mkpa ma wepu ya.
2. Ugbu a, gaa na nchekwa ebe edere ihe omume ahụ ma bugharịa faịlụ ahụ ebudatara n'ebe ahụ.
C: / Program Files / Sony / Vegas Pro13 / FileO Plug-Ins / aviplag
Jide n'aka na ị ga-edepụta ma chekwaa ọbá akwụkwọ ahụ, nke ị ga-ahụ na ụzọ a kapịrị ọnụ. Maka na ọ nwere ike ịbụ na ọhụụ ọhụụ ahụ agaghị arụ ọrụ ma ọ ga-adị mkpa ịlọghachite ochie ahụ.
Tupu ịmalite ịrụ ọrụ na ụlọ akwụkwọ, chọpụta ma ị nwere koodu codecs site na "Download codecs". Ọ bụrụ otú ahụ, ka anyị malite.
Jide n'aka na ịchekwa ụlọ akwụkwọ ọ bụla. Enwere ike na mgbe ị gbanwere akwụkwọ ọgụgụ, nchịkọta akụkọ agaghị amalite ma ọlị. N'okwu a, ị ga-alaghachite ihe niile dịka ọ dị.
1. Na folda ebe edere ihe omume ahụ, chọta faịlụ compoundplag.dll ma wepụ ya site na mbido ya.
C: / Program Files / Sony / Vegas Pro13 / FileO Plug-Ins / compoundplug
2. Ugbu a chọpụta faịlụ qt7plud.dll n'ụzọ dị n'okpuru ma detuo ya.
C: / Program Files / Sony / Vegas Pro13 / FileO Plug-Ins / qt7plug
3. Gaa na nchekwa ahụ
ma kpoo oba akwukwo a.
Ma ọ bụ ma eleghị anya, ụzọ ọzọ - gị codecs video adịghị ekwekọ na Sony Vegas. Na nke a, ị ghaghị iwepụ codecs niile.
Nwegharị video gaa usoro ọzọ
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịghọta ihe kpatara njehie ahụ, ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime ihe ndị a adịghị enyere aka, mgbe ahụ ị nwere ike ịmegharị vidiyo ahụ na usoro ọzọ nke ga-arụ ọrụ na Sony Vegas. N'otu ụzọ ahụ, ịnwere ike dozie nsogbu ahụ ma ọ bụrụ na Sony Vegas anaghị emeghe * .mp4. Na nke a, ịnwere ike iji Usoro ntọgharị usoro.
Download usoro Ụlọ ọrụ maka n'efu
Ee, e nwere ọtụtụ ihe mere Sony Vegas anaghị emeghe avi, a pụkwara inwe ọtụtụ ngwọta. Anyị na-ele anya ngwọta kachasị ewu ewu na olileanya na anyị nwere ike inyere gị aka.